5 Top Atụmatụ N'ihi Brisbane Site Train | Save A Train
Home > Zụọnụ Ndụmọdụ > 5 Top Atụmatụ N'ihi Brisbane Site Train
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 24/03/2020)
Brisbane bụ Queensland isi obodo na-agọzi A-ndepụta nkiri dị ka Oké Osimiri World, ezi lawns na ubi nke South Bank, na Story Bridge na ọtụtụ ndị ọzọ - Australia si fọdụrụ n'ezinụlọ cantilever akwa.
Ọ bụ na-a okike obodo, na art ngosi ihe mgbe ochie na veranda na chic cafes aplenty, plus ọ bụ nke zuru okè rata maka Gold Coast osimiri, oké osimiri, na surf.
Ọ bụrụ na ị na-na na ele mmadụ anya n'ihu na-azụ njem, okporo ígwè na usoro ndị Central obodo iga akụrụngwa na omenala akụkọ ihe mere eme.
Ya mere ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ Brisbane ụgbọ okporo ígwè, ebe a na-ise n'elu Atụmatụ.
Emi odude ke North Coast akara, Central Station bụ obodo netwọk si isi ojii na na nsogbu Bang na obi nke Brisbane Central n'ógbè azụmahịa.
Meghere azụ na 1889, ya classic facade ihu Anzac Square na ọ bụ isi akwara maka ụzọ gasị na-eje ozi Queensland na ndi fọduru nke Australia.
Ọ bụrụ na ị ga-amasị lodgings nso, Oaks Charlotte ụlọ nche Hotel bụ a kemmenyeujo ghota - ọ bụghị prohibitively oké ọnụ ma na sumptuous oke ime ileghara obodo skyline.
Brisbane Metro bụ ma arụmọrụ - ma uka ngwa ngwa na n'ụzọ usoro bụ n'ụzọ zuru ezu bukwa, ewu amalite siri ike nke afọ a na ọ ga-emeghe ka ọha na eze site 2023.
na 21 Kilomita ogologo, ọ ga na-eje ozi 18 ụgbọ ofụri obodo na bi na njem nleta myiri ga-enwe ike hop na na dị ka ha na-amasị.
Ọ na-efu A $ 944 nde, ma uru agụnye belata mkpọchi ma na-erughị nsogbu na Brisbane si beleaguered ụgbọ ala.
Ọ bụrụ na ị chọrọ a gbawara site n'oge gara aga (na ndị ọzọ ụzọ karịa otu), isi Brisbane si Roma Street Station maka mgbe Steam Train Sunday omume.
Kwụpụ n'ime genteel osisi e ji ebu ihe na ị ga-ozugbo ga-ebu azụ a ọzọ mara oge, dị ka gị na ezinụlọ gị chug tinyere gara aga Brisbane si kacha mma anyị hụtụrụla ebe.
Ọ bụ fun maka afọ niile, ma ụmụaka na ndị agadi na-karịsịa captivated site ya emere ọtụmọkpọ.
The noo Okporo ígwè Museum
Ipswich na nsogbu n'ebe ndịda ọdịda anyanwụ-nke Brisbane mepere ebe na ọ bụ ebe ị ga-ahụ ihe ndị magburu onwe noo Okporo ígwè Museum.
Ọ bụ ihe mmekọrịta na inspirational nketa ahụmahụ-chọpụtara na Australia kasị ochie ụgbọ okporo ígwè uloru na-juru n'ọnụ na obere uzuoku locomotives, nnukwu ulo oru ígwè, na multi-media ngosi.
Mgbe ị chọrọ ihe mmụta ma na-atọ ụtọ njem mmụta maka ezinụlọ ya dum, anya ọzọ.
Brisbane ọdụ ụgbọ bụ a ọrụ n'aka iga ehiwe nke ahụ na-sikwuo site cafes ka Fonzie Abbot, Ogwe ka n'ụzọ Tavern na adọba ụgbọala na enye dị ka Looking4.com.
Ma n'ihi na ọtụtụ adventurers onye na-abata site ikuku, ihe kasị mma banyere ya bụ Airtrain, na 13 kilometa COMMUTER okporo ígwè akara na-e swiftly spiriting njem si n'ọdụ ụgbọ ka Central Station kemgbe 2001.
Mgbe a-agwụ ike ụgbọ elu, Airtrain eburu gị etiti obodo na dị nnọọ 20 nkeji - mara mma nnukwu.
Soro anyị na ise Atụmatụ navigating Brisbane ụgbọ okporo ígwè na ị ga-anọ na track maka a ikenyeneke mbiet ezumike.
Ị nwere Atụmatụ Brisbane ụgbọ okporo ígwè njem? Na-eso ha na ihe ngalaba na ọ bụrụ na ị mkpa a ụgbọ okporo ígwè Zọpụta A ụgbọ okporo.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na nnọọ inye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/tips-brisbane-train/ - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#brisbane #railtips australia Brisbane by train ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ